Avy amin'ny WWE Rumor Mill: mpanimba mety hitranga amin'ny volan'ny lehilahy ao amin'ny tohatra tohatra Bank - Wwe
Avy amin'ny WWE Rumor Mill: mpanimba mety hitranga amin'ny volan'ny lehilahy ao amin'ny tohatra tohatra Bank
Ao amin'ny fanontana ny Radio mpandinika Wrestling , nambara fa mety mpanimba ny lalao tohatra Men's Money In The Bank.
ny fomba hiatrehana ny olona nosy
Raha ny fahitana azy, Samoa Joe dia mety handresy an'i Big Cass amin'ny lalao manasa-dalana, ary hahazo ny toerany amin'ny fifanintsanana tohatra Men's Money In The Bank. Ankoatr'izay, ny antsipiriany fanampiny momba izany dia efa noresahina.
Raha tsy fantatrao…
Nandritra ny andro maromaro lasa izay, ny WWE dia nikarakara lalao mendrika, nifanandrina tamin'ny Superstars ambony.
Ny lalao mahafeno fepetra amin'ny marika RAW sy SmackDown dia nahitana Superstar ambony marobe miantoka ny toerany ao amin'ny fifaninan'olom-bolan'ny Men and Women in The Bank.
Ny iray dia tokony hanamarika fa ny SmackDown Live Superstars Samoa Joe sy Big Cass dia tokony hifanatrika amin'ny SmackDown Live, amin'ny lalao manasa-dalana hahazoana isa amin'ny lalao Men's Money In The Bank.
Ilay mpanao gazety mpihetsiketsika taloha Dave Meltzer dia nanamafy fa ny Samoa Joe dia mety handresy an'i Big Cass, izay hanampy an'i Joe hahazo toerana iray amin'ny lalao tohatra voalaza etsy ambony.
Nanazava i Meltzer fa i Cass dia nibolisatra tamin'ny lalao fampisehoana an-trano mba hivarotra ny vokatry ny fidarohana azony tamin'ny tanan'i Daniel Bryan. Nanampy i Meltzer fa raha i Cass no mivarotra ny ratra amin'ny seho an-trano dia tena mbola hanohy hanao izany amin'ny rakipeo amin'ny fahitalavitra ihany koa izy.
Ankoatr'izay, nanantitrantitra i Meltzer fa ny lalao eo amin'i Joe sy Cass dia mety ho fohy, ary i Joe dia nahazo fandresena lehibe.
maninona ny lehilahy no mitarika dingana voalohany
Ny mpankafy dia afaka manantena an'i Samoa Joe handresy an'i Big Cass, ary hiroso amin'ny lalao tohatra Men's Money In The Bank.
Ny fihaonana voalaza etsy ambony dia atao ao amin'ny Money in The Bank PPV an'ny WWE, izay manomboka amin'ny Allstate Arena any Rosemont, Illinois ny 17 Jona.
Lazaina fa marina, Samoa Joe dia azo inoana fa ny mpilalao mahay indrindra amin'ny tolona matihanina ankehitriny.
Toa mampiasa tetikady lehibe ny WWE amin'ny alàlan'i Joe hamaky an'i Big Cass, ary eto no manantena fa ny The Samoan Submission Machine dia mandresy amin'ny lalao tohatra Money In The Bank ihany koa.
ohatrinona no ataon'ilay vatolampy
ahoana ny fomba hitenenana hoe tsara tarehy ny zazavavy
ahoana no ahafantarana raha sandoka ny namanao
tsy manana namana intsony aho any am-pianarana
ahoana no ilazanao amin'ny crusho fa tianao izy ireo